people Nepal » हिमालमा जीपीएस ट्र्याकिङ : के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ? हिमालमा जीपीएस ट्र्याकिङ : के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ? – people Nepal
हिमालमा जीपीएस ट्र्याकिङ : के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ?
काठमाडौं – साहसिक क्षेत्र मानिने आरोहणलाई सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउन अब नेपालमा पनि जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर फर्किएका अमेरिकी आरोही चेरिस तोफेर पउलले जीपीएस ट्र्याकिङको सफल प्रयोग गरेपछि नेपालका उच्च भागसम्म ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ट्र्याकिङ सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । आजको पूर्ण पोस्टअन्नमा खबर छ ।
पउलले प्रयोग गरेको जीपीएस ट्र्याकिङ सफ्टवेयरमार्फत अमेरिकामा रहेका साथीहरूले सगरमाथा चुचुरोसम्मको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । आरोही कहाँ पुग्यो, के गर्दै छ र सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ जान्न यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने पउलको भनाइ छ । आरोहणपछि ट्र्याकिङ रिपोर्टबाट आफूले आरोहण गरेको अवस्था र नक्सा दुरुस्त हेर्न पाएको पउलले बताउनुभयो ।
के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ?
ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ले देखाउने लंगिच्युड-ल्याटिच्युडलाई सफ्टवेयरबाट कैद गरी वास्तविक अवस्था हेर्ने र डाटा लिने प्रविधि ट्र्याकिङ हो । जीपीएसले पृथ्वीमा उभिएको बिन्दु देखाउने गर्छ, यसैलाई ट्र्याकिङ गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिन्छ । ट्र्याकिङमार्फत ठाउँ, व्यक्ति र विभिन्न गतिविधिको निगरानी गर्न सकिन्छ । लंगिच्युड-ल्याटिच्युडलाई ट्र्याकिङ गरेर पृथ्वीको वास्तविक ठाउँ पत्ता लगाउनु नै यो प्रविधिको काम हो ।
हिमालको धेरै आरोहण हुने फ्रान्स र स्विजरल्यान्डले धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो प्रविधि प्रयोग गरे पनि नेपालमा हुन सकेको थिएन । आरोही पउलले सुरक्षित बन्न जीपीएस डिभाइस आधारशिविरदेखि चुचुरो (८८८४ मि.) पुगेर फर्किंदासम्म प्रयोग गर्नुभएको थियो । नेपालको पर्वतारोहण प्रणाली ०३५ सालको पर्यटन ऐनअनुसार नै भएकाले सरकारले विदेशी आरोही आश्चर्यमा पर्ने गरेको बताइएको छ । नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले आरोहण गर्न विदेशी अन्कनाउने गरेको आरोही लाक्पागेलु शेर्पाले बताउनुभयो । फ्रान्स र स्विजरल्यान्डमा आरोहीले सलामी दस्तुर बुझाएपछि जीपीएसलाई अनिवार्य गरी सुरक्षित आरोहण गराउने गरिएको छ । ती देशले आरोहणका क्रममा कुनै समस्या भए जीपीएसकै सहयोगमा तत्काल उद्धारसमेत गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आरोहीले आफ्नो सुरक्षाका लागि गरेको पहल र आरोहण रेकर्डको प्रमाण वैज्ञानिक नहुनुले आरोही निरास हुने गरेकाले जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधिलाई राज्यले अनिवार्य बनाउनुपर्ने शेर्पाको माग थियो । जीपीएसले पर्यटकको उद्धार, मौसमको जानकारी, असुरक्षित अवस्था आए गाइड, राज्यपक्ष र एजेन्सीलाई अलर्ट गरी सूचना दिने, चुचुरोमा पुगेको वैज्ञानिक प्रमाण बन्ने र उद्धार गर्न सहज बनाउनेछ ।
जीपीएस ट्र्याकिङ प्रयोगको अवस्था
विज्ञानको विकाससँगै जीपीएस प्रयोग सामान्य भएको छ तर जीपीएसलाई ट्र्याकिङ गरेर प्रयोग गर्ने चलन नेपालमा कमै छ । हिजोआज नेपालमा गाडीको अवस्था जानकारी लिन जीपीएस ट्र्याकिङको प्रयोग गर्ने गरेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, एम्बुलेन्स, ढुवानी र निजी र भाडामा प्रयोग हुने गाडीले वास्तविक अवस्था थाहा पाउन जीपीएस ट्र्याकिङ गर्दै आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने प्रयोग भएको छैन ।
जीपीएसले देखाए पनि ट्र्याकिङ नगर्दा आफूले हेर्न खोजेको पृथ्वीको वास्तविक अवस्था जानकारी पाउन सकिँदैन । यसले दिएको डाटालाई सफ्टटवेयर माध्यमबाट हेर्ने र नक्सा बनाइने गरिन्छ । जीपीएस प्रयोग सबैका लागि खुला छ तर नेपालमा जीपीएस निर्यात गरी बिक्री गर्न राज्यको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आरोहणलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउन पर्यटन विभागलाई आरोही, व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षले अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ।तैपनि, विभागले यो प्रविधि प्रयोगबारे चासो नदेखाएको व्यवसायीको आरोप छ ।
हिमालको भौगोलिक स्थिति, आरोहीको सुरक्षा र प्रमाणीकरणका लागि जीपीएस महत्ववपूर्ण डिभाइस हुने उनीहरूको भनाइ छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको आरोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । विभागले समयअनुसार नीतिनियम परिमार्जन गरी यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उत्तम भट्टराईले बताउनुभयो । ‘यो डिभाइस प्रयोगले बेइमानी, नक्कली आरोही र गैरकानुनी कार्य गर्नेहरू रोकिन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले विश्व पर्यटन बजारमा आरोहण क्षेत्र र आरोहीले बनाएका रेकर्डको विश्वसनीयता बढ्छ ।’